က Tiger Woods '' Ethnicity ဆိုတာဘာလဲ Cablinasian, သူ Says
ဝုဒ်ကသူ့ multiracial နောက်ခံကိုဖော်ပြရန်ဖို့စကားလုံးတီထွင်
အများအပြားအမေရိကန်တွေလိုပဲက Tiger Woods '' လူမျိုးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံလူများစည်းဝေးပါရှိသည်။ ဘယ်ဝုဒ် multiracial ဖြစ်ပါသည်, ဟုနောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝုဒ် "Cablinasian" ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြတဲ့စကားလုံးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ပြထားခဲ့သည်။
ဝုဒ် '' မိခင်, Kultida , အဘယ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးရိုးနှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးမျိုးသောအစီရင်ခံစာများအရသိရသည်တရုတ်နှင့်ဒတ်ခ်ျတို့ပါဝင်သည်ထိုင်းတစ်ဦးဇာတိဖြစ်ပါတယ်။
ဝုဒ် '' အဖေ, Earl , အဘယ်သူ၏အမွေအနှစ်အမျိုးမျိုးသတင်းရပ်ကွက်များအဆိုအရလည်းအဖြူ, တရုတ်နှင့် Native အမေရိကန်ဘိုးဘေးတို့ပါဝင်သည်တစ်ခုအာဖရိကန်အမေရိကန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဝုဒ် '' အမွေအနှစ်အများစုအနက်ရောင်နှင့်အာရှဖြစ်ပြီး, လည်းအဖြူနှင့် Native အမေရိကန်မျိုးရိုးပါဝင်သည်။
အဘယ်သူသည်ဝုဒ် '' Ethnicity ကိုဂရုစိုကျ?
ပုံလူတော်တော်များများက။ ဝုဒ်ပထမဦးဆုံးဂေါက်သီးကမ္ဘာကြီးအတွင်းဆဲကသူ၏ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရရှိခဲ့အထူးသဖြင့်အခါ။ ကျားနီးပါးလုံးဝဟောင်း (er) နှင့်အဖြူရောင်ရှိနသောသူအားကစားသမား (နှင့်မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပရိတ်သတ်များ) ၏ဖွင့်ခဲ့တဲ့အားကစားအတွက်နုပျိုပါရမီရှင်နှင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
က African-Americans တွေမှကြွလာအထူးသဖြင့်သောအခါအပြေးပြိုင်ပွဲနှင့်လူမျိုးစုများ၏ကိစ္စရပ်များနှင့်အတူဂေါက်သီးရဲ့သမိုင်း, အကောင်းတစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအမှုအရာတို့ကိုအတိတ်၌ရှိကြ၏, သို့သော် 1960 သို့အမေရိက၏ PGA ယင်း၏စင်းလုံးငှားသို့ရေးထားလျက်ရှိ၏ "ကော့ကေးဆပ်သာ" အပိုဒ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမာစတာမှာပထမဦးဆုံးလူမည်းဂေါက်သီး 1975 သည်အထိမကစားခဲ့ဘူးနှင့်သြဂတ်အမျိုးသား 1990 သည်အထိ၎င်း၏ပထမဆုံးလူမည်းအဖွဲ့ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
အဆိုပါကာလအတွင်းကစားခြင်းကနေလူမည်းဖယ်ထုတ်ထားကြောင်းများစွာကိုအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဂေါက်ကွင်းရှိခဲ့သည် ဂျင်မ် Crow အဘိဓါန်ခေတ် ; အချို့သောပုဂ္ဂလိကကလပ်အသင်းအတော်လေးမကြာသေးမီအချိန်များသည်အထိပြုလုပ်လေ့အကျင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Nike ကတစ်ခုအစောပိုင်းစီးပွားဖြစ်မှာတော့ဝုဒ် "ငါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အရေရဲ့အရောင်၏ပေါ်မှာကစားခွင့်မပြုသူဖြစ်ကြောင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသင်တန်းများနေဆဲရှိပါတယ်။ " ဟုပြောသည် သူက (အချို့ရပ်ကွက်ထံမှ) သည်ဝေဖန်မှုများကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲဒီအခြိနျမှာစစ်မှန်တဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝုဒ်ပထမဦးဆုံး 1996 ခုနှစ်လိုလားသူဂေါက်သီးမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်ကိုဖြတ်လာတဲ့အခါသူကပေါ်ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သောအနက်ရောင်ဂေါက်သီးခဲ့ PGA Tour နှစ်ပေါင်းများစွာ၌တည်၏။
အထက်တွင်မြင်ကြသကဲ့သို့ပင်, ဝုဒ်တစ် multiracial, Multi-တိုင်းရင်းသားမိသားစုနောက်ခံထားပြီး, သူသည်အပြေးပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထပ်ထပ်မေးခွန်းများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဝုဒ်ရှင်းလင်းစွာကြောင်းအခြေအနေမှာထားခံရမသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ 1997 ခုနှစ်တွင်သူသည်ကမ္ဘာသူသညျမိမိကိုဖော်ပြရန်မတိုင်မီသူနှစ်ကတီထွင်ဆိုပါတယ်စကားလုံးတစ်လုံးဖော်ပြခဲ့တယ်။
က Tiger Woods ဒင်္ဂါးပြားဟာ Term '' Cablinasian ''
တစ်ဦးလိုလားသူဂေါက်သီးအဖြစ်ဝုဒ် '' ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝနှစ်က (သူက 1996 PGA Tour ရာသီနှောင်းပိုင်းလိုလားသူလှည့်) 1997 ခုနှစ်, အသောသူသည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထင်ရှားယခုနှစ်ရဲ့ "Cablinasian ။ "
အဆိုပါ Oprah Winfrey Show ကိုအပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသော, ဝုဒ်ကသူ့အစောပိုင်းကျောင်းကနေ့ရက်ကာလ၌သူသည်မိမိအပြေးပြိုင်ပွဲမှလာမယ့်ပုံစံများအပေါ်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားထားဖို့တောင်းခဲ့ရှင်းပြသည်။ ယနေ့ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများ, သူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတင်ပြကြသည်မှန်လျှင်,a"ကို multiracial" option ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ထို့နောက် back မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ကြီးဝုဒ်သူဖန်ဆင်း, Oprah ရှင်းပြ portmanteau Cablinasian:
နျြ့ဘုရငျ့ခုနှစ်တွင် ca ucasian BL ack (Native အမေရိကန်) အာရှ
+ အာရှ = Cablinasian အတွက် ca + BL +
Bernhard Langer: မာစတာ Champ, အကြီးတန်းခရီးစဉ်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Paula Creamer ၏ဓါတ်ပုံများ
ဟောငျးတွမ်မောရစ်: ဂေါက်ကွင်းတစ် Pioneer
Paula Creamer ရုပ်ပုံများ
ဒါ့အပြင် '' Winbee '' အဖြစ်လူသိများ Inbee ပန်းခြံ,
Helper Delphi အတန်းအစား (နှင့်မှတ်တမ်း) နားလည်ခြင်း
Haley Reinhart သီချင်းများ - American Idol ရာသီ 10
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS နယူးဂျာစီပြည်နယ် (BB-62)
ESL ဝေါဟာရသင်ခန်းစာအစီအစဉ် - အဆင့်သင်ယူသူကစပြီးများအတွက်အတိုက်အခံ
Hawayo Takata Usui Reiki မျိုးရိုးက
အဆိုပါ Permian ဝှမ်းအဆင့်လက်ခံရေး၏တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်
တစ်ဦး Wiccaning ကဘာလဲ?
နွေဦး-loading Camming ဖုန်းများအတွက်အကြောင်းအားလုံး
Ross ကဘား, မစ္စစ္စပီအစိုးရ - အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပင်လယ်လိပ်7မျိုးစိတ်သစ်
Francis က Ouimet အတ္ထုပ္ပတ္တိ: အဆိုပါအပျော်တမ်းအဘယ်သူသည်သရုပ်ြပအမေရိကန်ဂေါက်သီးရိုက်
ပြင်သစ်အတိတ်မှအလွန်အရေးကြီးသည် - Impératif Pass
အီတလီကြိယာ conjugation: Guidare